Punto Banco एउटा हो अमेरिकी प्रसिद्ध को विविधता Baccarat खेल जुन डिलर एक विशेष रूपमा आठ-डेक जुत्ता संग काम गर्दछ। यो एक लोकप्रिय खेल हो कि जीत को मौका मा पूर्ण निर्भर गर्दछ। पुन्टो बान्कोको उद्देश्य ब्यान्कर वा एक खेलाडीले सम्भव भएसम्म9नजिकको स्कोर प्राप्त गर्ने सम्भावनामा शर्त लगाउनु हो। प्रत्येक हातको योग पकड कार्डको मानहरूको सारांश द्वारा गणना गरिन्छ। 1-9 अंकित कार्डहरू अंकमा तिनीहरूको अनुहार मानसँग मेल खान्छ, जबकि राजा, रानी, ​​जैक र नम्बर 10 सँग शून्य अंकहरू छन्। यदि हातमा कार्डहरूको कुल योगले9भन्दा बढी छ भने, 10 द्वारा मान कम हुन्छ, र परिणाम कुलको रूपमा लिइन्छ।
एक पटकमा एकजना गेममा अधिकतम बाह्र खेलाडीहरू भाग लिन सक्छन्। कैसीनो बैंकरको रूपमा नामित गरिएको छ जबकि उच्चतम बोल्डर खेलाडीलाई मानिन्छ। खेलाडीहरूसँग बैंकर र खेलाडी बीचको टाईमा सट्टाको विकल्प पनि छ। कार्डहरू पहिलो पटक अनुहार-तल छन्। तिनीहरू त्यसपछि फर्काइएको छ, र कलरले प्रत्येक खेलाडी द्वारा प्राप्त गरेका अंकहरूको गणना गर्दछ। यदि कुनै खेलाडीले पहिलो गोलमा 8 वा9बिन्दुहरू पाउँछ भने, उनीहरूले विजेता घोषित गरे, र थप कार्डहरू निलम्बित छैनन्। एक खेलाडी बीचको हुन्छ0र5पोइन्टहरूलाई अर्को हिट अनुमति दिइएको छ। यदि एक खेलाडीले दायराभन्दा माथि केहि भएमा, तिनीहरू खडा गर्न आवश्यक छन्।
उच्चतम भुक्तानी 8 को साथ बैंकर र घर को बीच एक टाई मा शर्त लगाईयो: 1 प्रतिशत। खेलाडिको खेलमा बिस्तारले 1: 1 भुक्तानी गर्दा ब्याककरमा दाखिल गर्दा 5% कटौती हुन्छ किनकि प्रायजसो घरहरूमा सधैं घर भेटिन्छ।
Punto Banco: नियमहरू
Punto Banco Baccarat को एक लोकप्रिय संस्करण हो, सबैभन्दा लोकप्रिय कैसीनो खेलहरु मध्ये एक।
यो बैंकर र खेलाडी बीचको फरक कुरा हो। यस खेलमा, निश्चित नियमहरू छन् र कार्डहरू अनुसार उनीहरूको व्यवहार गरिन्छ। खेलको मुख्य उद्देश्य जसको हात, खेलाडी वा बैंकरमा शर्त हो,9नम्बरको नजिक हुनेछ। त्यहाँ तीन शर्त उपलब्ध छन्; बैंकरको, खेलाडी, वा बैंकर र प्लेयर बीचको टाई।
Punto Banco धेरै लोकप्रिय छ किनकी यो प्ले गर्न सरल छ र एक शुरुवात पनि नियम सिक्न र धेरै परेशानी बिना खेल को मजा लिन सुरु गर्न सक्छन्।
खेलाडीहरू। खेल एक सिङ्गार तालिका वा खेलाडी र खेलाडी र ओभरल टेबलमा खेल्न सकिन्छ। एक पन्टो बान्को खेल सत्रमा अधिकतम 12 जना खेलाडीहरू भाग लिन सक्छन्। केवल तालिकामा खेलाडीहरूले तिनीहरूको शर्त राख्न अनुमति दिए। एउटा शर्त राखिएको छ; तपाईं आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न।
कार्ड मूल्यहरू। खेल कार्डको मानक डेकसँग खेलिएको छ, अनुहार कार्डहरू साथै सूट कार्ड सहित। अक्सेन्ट एक बिन्दुको लायक छन्। कार्डहरू2लाई9मा तिनीहरूको अनुहार मानको लायक छ। दसैँ, जैक, क्वीन्स र राजाहरू प्रत्येक शून्य अंकको लायक हुन्छन्।
खेलिरहेको। एक पटक सबै शर्तहरू राख्दा, कार्डहरू पहिलो पटक अनुहार-अनुहारहरू खेलाडीहरू र अन्ततः बैंकरमा छन्। यो दोहोरो पहिलो चरणमा प्रत्येक कार्डको लागि फेरि गरिन्छ। त्यसपछि कार्डहरू अनुहारमा परिणत हुन्छन् र डीलर ले अंक गणना गर्दछ र प्रत्येक खेलाडी द्वारा कमाएको कुल घोषणा गर्छ। यदि कसैलाई पहिलो चरणमा पूर्ण 8 वा9छ भने, कुनै कार्डहरू खेलाडीहरू छैनन्, र उच्च स्कोरले खेल जित्छ।
यदि कुनैसँग कुनै पनि 8 वा9छैन भने, खेल जारी छ। यदि कुनै प्लेयरमा0को5को स्कोर छ भने, त्यसपछि तिनीहरू एक कार्ड थपिनेछन्। यदि तपाइँ6र7बीचको स्कोर प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई खडा गर्नु पर्छ। बैंकरले आफ्नो हात अनुसार डराउँछ वा खेलाडीले भने। यदि बैंकरसँग 0-2 को अंक छ भने, त्यसपछि त्यो सधैँ आकर्षित हुनेछ। यदि उहाँसँग3को अंक छ भने, उनीहरूले खेलाडीहरू विरुद्ध 0,1,2,3,4,5,6,7 र9सँग आकर्षित गर्नेछन्।
भुक्तानी Punto banco सँग धेरै क्यासिनो खेलहरूमा सबैभन्दा कम घरको लाभ छ।
बैंकरले सबै विजेता शर्तहरूमा घरको लागि 5% कमीशन प्रदान गर्दछ। खेलाडी वा पुन्टोले 1.24% को घर किनारालाई आकर्षित गर्दछ जबकि बान्को वा बैंकरले 1.06% को लाभ उठाउँदछ। घटनामा तपाईंले टाईमा शर्त लिनुभएको छ भने, तपाईं 14.44% को उच्चतम घर फायदालाई आकर्षित गर्नुहुन्छ। यो एक टाईमा शर्तको लागि नमान्ने हो किनकि यो निकै खेलकुद खेलको परिणाम हो।
यो खेलले धेरै खेलाडीहरूलाई यसको विशेष रहस्यमय कारणले आकर्षित गर्दछ। यो उच्च रोलरहरूको लागि खेलको रूपमा मानिन्छ, तर कसैले यसलाई खेल्न सक्छ। धेरै कैसीनोहरू पन्टो बान्को गेमहरूको लागि असाधारण कोठाहरू सेट गर्नुभयो। फ्लोरिडा पर्यवेक्षकहरू पनि खेलहरूमा आँखा राख्न र धेरै डीलर्सहरू मजा छ।
???? 635% क्यासिनोमा मिलान
???? 205 फ्री स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
???? 130 फ्री spins
💵 605% बोनसस क्यासिनो
💵 490% म्याच बोनस क्यासिनो
💵 $ 330 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 $ 4870 जम्मा बोनस कोड छैन
💵 $ 825 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 565% जम्मा मिलान बोनस
💵 € 1100 जम्मा जमा बोनस
💵 EUR 50 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 $ 610 निःशुल्क चिप
💵 300% साइन अप कैसीनो बोनस
💵 20 नि: शुल्क स्पिनहरू अहिले
💵 265% म्याच बोनस क्यासिनो
💵 180% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 € 666 नि: शुल्क पैसा
💵 $ 650 नि: शुल्क क्यासिनो चिप
💵 £ 4005 जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 895% बोनस
💵 £ 3380 जम्मा बोनस छैन
💵 € 1570 NO DEPOSIT BONUS CODE
💵 $ 140 फ्री कैसीनो टिकट
💵 $ 815 NO DEPOSIT
💵 EUR 295 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 पाउन्ड 60 नि: शुल्क नगद
💵 $ 1065 NO DEPOSIT CASINO बोनस
💵 EUR 345 कैसीनो चिप
💵 पाउन्ड 395 निःशुल्क CHIP
💵 £ 3955 जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 580% साइन अप क्यासिनो बोनस
💵 यूरो 4625 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो
💵 190 नि: शुल्क जम्मा कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 £ 310 FREE CHAS CASINO
💵 175% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 115% कैसीनोमा मिलान
💵 $ 222 फ्री कैसीनो चिप
💵 705% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 65 फ्री स्पिन कुनै जम्मा कैसीनो छैन
💵 655% जम्मा मिलान बोनस
💵 € 1515 जम्मा बोनस कोड
💵 EUR 1040 no deposit bonus
💵 $ 88 नि: शुल्क पैसा
💵 60 नि: शुल्क स्पिनहरू
💵 $ 1560 जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 यूरो 3235 जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 € 425 मुक्त चिप
💵 EUR 115 फ्री कैसीनो चिप
💵 $ 670 नि: शुल्क चिप
💵 € 580 नि: शुल्क कैश
समृद्धि पैलेस एक साधारण5रिल हो, Play 'N Go बाट 10 payline स्लॉट जुन प्ले उपलब्ध छ ...
वाइकिंग रेन्क्सेफ्ट सात सात, लेवल-आधारित ग्रिड स्लॉटमा अभिनव हो जसले धेरै आकर्षक सुविधाहरू प्रदान गर्दछ जुन ...
आफैलाई सेट गर्नुहोस्, आफ्नो आँखा बलमा राख्नुहोस् र माथिल्लोमा एक प्यारा साइकल किक हिट गर्न माथि गियर ...
Punto banco अपडेट गरिएको: फेब्रुअरी 6, 2019 लेखक: आमिर Berrey
3.0.0.0.1 उन्मुख को ज्वेल्स
3.0.0.0.2 Cops 'n' robberers
3.0.0.0.5 बिरालोहरु प्रतिलिपि गर्नुहोस्
3.0.0.0.6 नियन स्टेक्सक्स
3.0.0.0.7 स्ट्रीट जादू
3.0.0.0.8 कराटे सुँगुर
3.0.0.0.9 अङ्ग्रेजी पत्थर
3.0.0.0.12 फल 'एन' रयलहरू
3.0.0.0.13 आयरन मैन2खरोंच
3.0.0.0.14 फायर हक
3.0.0.0.16 समृद्धि महान्
3.0.0.0.17 रगत रील गर्नुहोस्
3.0.0.0.18 वाइकिङ दौड
3.0.0.0.19 घटना क्षितिज
3.0.0.0.20 आर्चनहरू: मुक्ति
3.0.0.0.22 उत्सुक मिसिन मोबाइल
3.0.0.0.23 शीर्ष ट्रम्पहरू अभिनेता
क्यासिनो बोनस > वेगासहाउस खेलहरू > Punto banco